It is me. Ko Niknayman.: နအဖရဲ့ မင်းကျင့်တရား (၁၀) ပါး။
တပ်မတော်ခေါင်းဆောင်ကြီးတွေ ရဲ့ တိုင်းပြည်အပေါ် ထားတဲ့ စေတနာမေတ္တာ နဲ့ ပြည်သူ ပြည်သားတွေ အပေါ်မှာ ရာဇဓမ္မ ၁၀ ပါးနဲ့ အညီအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ သက်သေ သာဓက နဲ့ အညီပြလို့ ရပါတယ်...
(၁) ဒါန- အလှူပေးခြင်း ( သံဃနာယက ဆရာတော်ကြီးများကို ဘွဲ့ တံဆိပ် ဆက်ကပ် လှူဒါန်း သည် မှအစ၊ဘု ရားထီးတင်၊ကျောင်းဆောက်၊တံတား ဆောက်၊ လမ်း ဖေါက် ခြင်း များ နှင့် သမီး အငယ်ဆုံးကို လင် ပေးစား တာ တောင်ကိုယ့်ပိုင် ချွေးနည်းစာ ထဲမှ ရက်ရက်ရောရောလှူဒါန်းခြင်း)
(၂) သီလ-သီလဆောက်တည်ခြင်း (နိုင်ငံတော် သံဃာ့နာယက ဆရာတော်ကြီးများထံမှ နေ့စဉ် ၅ ပါး ၈ပါး ၉ပါး ၁၀ပါး အစရှိတဲ့ သီလတွေကိုမနိုင်မနင်း ဆောက်တည်ခြင်း မှစလို့တပ်ချုပ်ကြီး ဆိုလျင် ညစဉ် (၇)နာရီမှ ( ၈ ) နာရီအတွင်း လာတဲ့ တရုပ်ကား ကိုးရီးယားကား များကို နှစ်ချိုက်စွာ ကြည့်ရှူ ဆောက်တည်ခြင်း များအထိ (ကောလဟာလများမပါ)...)
(၃) ပရိစာဂ- စွန့် ကျဲပေးကမ်းခြင်း ( တခြားဘာမှမပြောလိုပါ ကိုယ့်ရဲ့ သွေးသား ရင်းများရဲ့ ဒါန မင်္ဂလာ ဆောင်တွင် တစ်ထောင်တန်များ ရက်ရက်ရောရောစွန့် ကျဲ ခြင်းကိုရှူ့ ( တခြားဘာများရှိသေးလဲတိဘူး)...)
(၄) အဇ္ဇ၀- ဖြောင့်မတ်ခြင်း ( ပြည်သူနဲ့ ပါတ်သက်ရာတွင် ၄င်း တိုင်းတပါးနှင့် ပါတ်သက်ရာတွင်၎င်း မှန်ကန် ဖြောင့်မတ်စွာ ကျင့်ကြံလေ့ရှိတယ် ..အမှန်တကယ် ပြင်းထန်သော ပြစ်မှုများနှင့် တစ်တိုင်းပြည်လုံး ကို ပျက်စီးအောင် ကြံဆောင်သူများ ကိုတောင် ပုဒ်မ ၅၊ ၉၆ လောက် နှင့်ပဲ အရေးယူရန် ပြင်ဆင်ခြင်းကိုရှူ့ ...)
(၅) မဒ္ဒ၀- နူးညံ့ခြင်း ..( နူးညံ့တာ ကတော့ တစ်ဦးခြင်းစီရဲ့ မျက်နှာအမူအရာ အပြောအဆို (ဥပမာ အများသိတစ်ခုပြောရရင် ဒေါ် စု ကြည် ဟု ကြမ်းတမ်းစွာ ခေါ် ဆိုရမည့် အစား ကုလားမ ဟု လူကြီး လူကောင်း ပီသစွာ ခေါ်ဆိုခြင်း ကိုရှု).ပြည်သူ များ အား ပြုမူ ဆက်ဆံ ပုံကိုထောက်ရှူ့ ..)
(၆) တပ- ခြိုးခြံခြင်း ( ဒါကတော့ သက်သေပြစရာလိုမည်မထင်ပါ .. )
မိမိရရှိနေသော မြောက်များ လှစွာသော လစာငွေများထဲမှ အပုံတစ်ရာပုံ လျင် တစ်ပုံခန့် သာ မသုံးမဖြစ် သမီး မင်္ဂလာဆောင်အတွက် အသုံးစရိတ်နှင့် သမီး အတွက် တဆင်စာလောက်သာ အသုံးပြုခြင်း။နိုင်ငံခြားမှ တန်ဖိုး ကြီးစွာတင်သွင်းနေရသော လောင်စာဆီအား ခြိုးခြံချွေတာသောအားဖြင့် မသွင်းပဲ ရှိတာကိုသုံးစေခြင်း ... တိုင်းပြည်၏အပိုဖြုန်းတီးငွေဖြစ်သော ပညာရေး၊ ကျမ္မာရေး၊ဖွံ့ ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့ တွင်သုံးရမည့်အစား မရှိမ ဖြစ် တပ်မတော် အတွက် လက်နက် ဖြည့်တင်းခြင်း ကိုသာပြုခြင်းအား ရှု..)
(၇) အကောဓ- အမျက်ဒေါသမပြင်းထန်ခြင်း ..( ]] စစ်တပ်ဆိုတာ မိုးပေါ်ထောင်ခြောက်တာမပါဘူး...}} ကိုရှု)
( ၈ ) အ၀ိဟိံသ- ဆင်းရဲသားတို့ အားမနှိပ်စက်ခြင်း ..( ဆင်းရဲသားတို့၏ တနေ့ တာ ရုန်းကန်မှူ တွင် မလိုအပ်ဘဲ ကားတိုးစီးခြင်းမှ လွတ်ကင်းစေကာ လမ်းလျှောက် စေချင်သော အားဖြင့် လောင်စာဆီ ဈေးတက် ကာ ကားခဈေး ကြီးစေခြင်းဖြင့် ထိန်းချုပ်ခြင်း... အလိုမတူသူ ပြည်သူများ မှ အန္တာရယ် ပြုခြင်း မှ ကယ်တင် စေခြင်း အလို့ ငှာ ညလယ်သန်းခေါင်ယံမှ အိမ်တွင်းသို့ ရုတ်တရက် ၀င်ရောက် ကယ်တင်ခြင်း အစရှိသဖြင့်..။
(၉) ခန္တီ- သည်းခံခြင်း (နိင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူလူထုအား ပျက်စီးရာ ပျက်စီး ကြောင်း အကြံအစည် နှင့်မြေပေါ် မြေအောက် အဖျက်သမားများ ပူးပေါင်း ပါဝင်လျက် ခေတ်မှီ၍ ပေါက်ကွဲအား ပြင်းထန်သောချိန် ကိုက်ဗုံး များ ကိုနိုင်ငံတွင်း ခိုးဝှက် သွင်းယူ လာသည်ကို ကြိုတင် သိသော်လည်း ပြည်သူလူထု အထိတ်တလန့်ဖြစ်မည် ကိုစိုး ရိမ် သောကြောင့် သည်းခံ၍လျို့ ဝှက် ဆောင်ရွက် ရခြင်းမျိုး .(မဟုတ် မမှန်သတင်း ဖန်တီး လုပ်ကြံကာ ညာ ပြီး) ..)
(၁၀) အ၀ိရောဓန- ပြည်သူအားမဆန့် ကျင်ခြင်း .( အောင်မလေးဗျာ .အဲဒီအချက်ကတော့ဘာမှသက်သေ ပြစရာ မလိုတော့ပါဘူး ..ပြည်သူလူထု ကလိုလား တောင့်တ လွန်းလို့ မလုပ်ချင်ပေမယ့်လည်း အနှစ် နှစ် ဆယ် ထဲရောက်လာလို့အသက်တွေ ၇၀ .၈၀ လောက်ဖြစ်နေတာတောင် ပြည်သူ့ ဆန္ဒအရ ပင်စင် မယူ ပဲ ဆက် လက် ကိုယ်ကျိုးစွန့် နေရတာသာ ကြည့်ကြပါတော့....)
တင်ပြသူ - မျိုးချစ်။
Posted by Ko Niknayman at 9:04 PM